ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: မြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့်မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲပုံများ
ABSDF- NB PRESS
ABSDF မြောက်ပိုင်းပြန်ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရန်ကုန်မှာပြုလုပ် ကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်ဒေသမှာစစ်ထောက်လှမ်းရေး...Like · · Promote · Share
Ye Lin Aung and Phyo Naing like this.
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး မြောက်ပိုင်းပြန် ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများ ထုတ်ပြန်ချက် ၁/၂၀၁၃ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588412951174504&set=a.362239160458552.107216.287336421282160&type=1&theater
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအား မေလ ၂၂ ရက်တွေ့ရစဉ်
January6at 8:24pm · Like · Remove Preview
ABSDF မြောက်ပိုင်းပြန်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုမြောက်ပိုင်းပြန်တွေက ပဲအဆုံးသတ် အောင်ရေးမယ်...........
ABSDF (NB) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသား ရဲဘော်ဟောင်းများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
by Mizzima - News in Burmese on Saturday, January 5, 2013 at 7:51am ·
ABSDF (NB) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသား ရဲဘော်ဟောင်းများ၏ ၁၉၉၁-၉၂ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျောင်းသား ရဲဘော်များအား စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟု စွပ်စွဲသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ဟိန်းထက်၊ မဇ္ဈိမ) ABSDF (NB) မှ ရဲဘော်ဟောင်းများဖြစ်သော မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ကိုညီညီကျော်၊ ကိုရဲလင်းတို့ တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Ko Lin Wai Aung, Ye Myint, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ and 12 others like this.
Ko Lin Wai Aung ကိုတိုးကြည်၊ကိုရဲလင်း၊မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ကိုညီညီကျော်၊ကိုစိုးလေး၊ ကိုမိုးဇော်ထွန်း
Like · Reply ·3· January5at 8:05am
ABSDF(NB) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများအား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၅ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်၊မဇ္ဈိမ)
Ko Lin Wai Aung, Thin Thin Nyi, Kyaw Swar and 16 otherslike this.
Robert Hla Tun ဘယ်သူတွေဆိုတာ သိချင်ပါတယ်
Like · Reply · January5at 6:15am
Moekyaw Lay ဖာနိုင်ငံပါ
Like · Reply · January5at 11:31pm
Like · Reply · January 8 at 1:29am · Edited
ABSDF(NB) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများ၏ ၁၉၉၁-၉၂ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျောင်းသားရဲဘော်များအား စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟုစွပ်စွဲသတ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၅ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်၊မဇ္ဈိမ)ABSDF(NB)မှ ရဲဘော်ဟောင်းများဖြစ်သော မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ကိုညီညီကျော်၊ ကိုရဲလင်းတို့ တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
You, Ko Lin Wai Aung, Robert Hla Tun and2others like this.
Ko Lin Wai Aung ကိုညီညီကျော်
Like · Reply · 1 · January5at 5:59am
ABSDF(NB) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများ၏ ၁၉၉၁-၉၂ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျောင်းသားရဲဘော်များအား စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟုစွပ်စွဲသတ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၅ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်၊မဇ္ဈိမ) ABSDF(NB) ရဲဘော်ဟောင်း ကိုရဲလင်းမှ ABSDF(ဗဟို)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဆွေးနွေးချက်များအား မီဒီယာများကို ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့သည်။
Ko Lin Wai Aung, Khine Khine Saw Lwin, Kyaw Swar and5others like this.
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများကနေ မီဒီယာတွေ့ဆုံ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်မွန်းလွှဲ ၂ နာရီက တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ — in Yangon, Myanmar.
You and Ko Lin Wai Aung like this.
Liked · January 5
ABSDF ကျောင်းသူရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်မှာ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားစဉ်
Robert Hla Tun and3others like this.
ABSDF- ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း ကိုစိုးလေးမှ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားစဉ်
ABSDF- ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း ကိုညီညီကျော်မှ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားစဉ်
Hsenghpanamhkok Sai likes this.
Cartoon Aungmaw ကိုညီညီကျော် ပါ ။
January6at 4:12pm · Like
တောင်ပိုင်းတွင် အသတ်ခံခဲ့ရသော ကျောင်းသားရဲဘော် ကိုဋ္ဌေးနိုင်ရဲ့ ညီမ
ABSDF- ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း ကိုဘိုဘိုက မေးခွန်းများကို ဖြေကြားစဉ်
You, Ko Lin Wai Aung, Htein Lin, D Day Ang and 16 otherslike this.
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသား ရဲဘော်ဟောင်းများ မီဒီယာ တွေ့ဆုံပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင် လမ်းမပေါ်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
You, Ko Lin Wai Aung, Aung Moe Win, Robert Hla Tun and17 others like this.
Thant Zin Mandalay မနန်းအောင်ထွေးကြည် အမှုမှန်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ ပါဂျောင်ငရဲခန်းကဟာတွေကို ပြည်သူတွေ အကုန်သိအောင်လုပ်ပါ။
လက်မရွံ လူသတ်သမားကြီးရော်နယ်အောင်နိုင်တို့ ဥက္ကဌ ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်သမျှခေါင်းခံမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ရှိပါသေးတယ်။
January5at 3:40am · Like · 2
Cho Tu Zal ပြည်တွင်းမှာတော့ မလွယ်သေးဘူး ရဲဘော်တို့ရေ. . .
တရားဥပဒေ ရဲ့ အထက်မှာ လူတချို့ ရှိနေသေးတယ်။
တကယ်လို့ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့၊ ပြည်ပက နိုင်ငံတကာ တရားရုံးကို တင်ပါ လို့သာ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ...See More
January6at 9:29am · Edited · Like · 1
MC Monywa ပြည်တွင်းမှာမလွယ်သေးဘူးဆိုတာက ဇာဂနာလိုကောင်မျိုးတွေ သူတို့ဆီက စားထားတဲ့သူတွေကိုပြောတာလား
January6at 9:40am · Like
Khine Mye True Blueဇာဂနာထောင်ထဲမှာအနေများလို့
January6at 7:55pm via mobile · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 7:57 PM